မြကျွန်းသာ မိုးကုတ်ရိပ်သာ မြန်မာ့ရေဘေးကူညီရေး အလှူခံဌာန ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ပါရမီဦးဆောင်လျက် မြကျွန်းသာ မိုးကုတ်ရိပ်သာ မြန်မာ့ရေဘေးကူညီရေး အလှူခံဌာနကို (၆-၈-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘေးသင့်ရောက်နေသော ဒေသအသီးသီးသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းပေးနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်နေပါသည်။ ဆန် ဆီ ဆေး ဆား စသည့် စားသောက်ကုန်များ သောက်ရေသန့်ဗူးများ အင်္ကျီ လုံချည် စောင် ခြင်ထောင် စသည့် အဝတ်အထည်များ အိုးခွက်ပန်းကန် လက်နှိပ်မီးစသည့် အသုံးအဆောင်များ စာအုပ် ဘောပင်စသည့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းနှင့် စာရေးကိရိယာများ ဝတ္ထုငွေကြေး စသည် မိမိဆန္ဒရှိရာ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်နိုင်ငံမှမဆို အောက်ဖော်ပြပါ AYA Bank Account တွင်လည်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ Name: ASHIN PARAMI Account No: 0043222010001217 လှူဒါန်းရန် ၁။ ဒေါက်တာအရှင်ပါရမီ မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ […]
Mya Kyun Thar Mogoke Meditation Centre Myanmar Flood Relief Association (MFRA) Myanmar Flood Relief Association (MFRA) is founded by Dr. Parami, the head of Mya Kyun Thar Mogoke Meditation Centre as the leader of association on August 6, 2015. We are planning to send the donations to different parts of recently and currently flood-hit areas in Myanmar. Therefore, we […]
(၁၇)ကြိမ်မြောက် မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစခန်း (၁၇) ကြိမ်မြောက် မိုးကုတ်ဝိပဿနာအလုပ်သင် (၇)ရက်တရားစခန်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါ၍ တရားစခန်းဝင်ယောဂီများ ကြိုတင်စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ တရားစခန်းရက်- ၁၃၇၅-ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း (၁)ရက်နေ့မှ (၇)ရက်နေ့အထိ။ (၃၁-၁-၂၀၁၄) ရက်မှ (၆-၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့အထိ နေရာ- မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ (တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ် ပြန့်ပွားရေးဌာန)၊ ရတနာကျွန်းရိပ်သာ၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဖုန်း- ၀၁-၆၉၁၅၅၃ အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ မှတ်ချက်။ ။ ယောဂီများသည် (၃၀-၁-၂၀၁၄)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် အရောက်လာကြရမည်ဖြစ်ပြီး (၇-၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့ နံနက်စာစားပြီးမှ ပြန်ထွက်ကြရပါမည်။
ဒေါက်တာအရှင်ပါရမီ၏ (၄၃)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူတော် ၀ိဇာတမင်္ဂလာကို (၉-၇-၂၀၁၃) ရက်နေ့တွင် ခမ်းနားထည်ဝါစွာကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍ မည်သူမဆို တက်ရောက်ကြည်ညိုကုသိုလ်ယူနိုင်ကြစေရန် လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ရက်- ၉-၇-၂၀၁၃ အချိန်- နံနက် (၉း၃၀)နာရီ နေရာ- ရတနာဒီပဓမ္မာရုံ၊ မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ၊ ရတနာကျွန်းရိပ်သာ၊ သုနန္ဒာလမ်း၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ရန်ကုန် အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ (တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးဌာန) ဖုန်း- ၀၁ ၆၉၁၅၅၃၊ ၀၉၅၅၀၄၁၅၆
မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ (တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးဌာန) ၌ ကလေးသူငယ်များအတွက် ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလ- (၁၅-၃-၂၀၁၃) ရက်နေ့မှ (၃၁-၃-၂၀၁၃) ရက်နေ့အထိ အချိန်- နံနက် (၀၈း၀၀)နာရီမှ (၁၀း၀၀)နာရီအထိ နေရာ- မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ၊ ရတနာကျွန်းရိပ်သာ၊ သုနန္ဒာလမ်း၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းသင်ရင်း ကလေးများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာတစ်ချိန်ပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးပါမည်။